Eze nwamba Megaways nyochaa (RTP: 96.72%) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Egwuregwu ndị Africa na-ahụkarị bụ ihe nkịtị na ụlọ ọrụ oghere. N’agbanyeghị nke ahụ, egwuregwu ndị nwere ụdị isiokwu a nwere nnukwu ikike n’ahịa. Ya mere, Big Time Game mere King of Cats Megaways dị ka oghere Megaways na-adọrọ mmasị na-atọ ụtọ na njirimara pụrụ iche. Maka ndị egwuregwu ahụ hụrụ freebies n’anya, King of Cats Megaways bụ otu n’ime egwuregwu ndị ahụ na-enye ọtụtụ Bonus Spins.
Reels: 6Rows: 2-7RTP: 96.72% Min nzọ: £ 0.2Max nzọ: £ 20Paylines: 117,649xMax win: 56,620x
Eze nwamba Megaways oghere imewe
Dị ka aha ya na-egosi, King of Cats Megaways nwere ihe odide feline. Ọ nwere oke ohia / safari nke nwere ike ịdọrọ uche ọtụtụ ndị egwuregwu na-abanye na nwamba buru ibu. Dabere na ụdị egwuregwu ị chọrọ igwu egwu, ntọala nke egwuregwu ahụ nwere ike ịgbanwe. Egwuregwu Lion ga-akpọrọ gị na safari mgbe Puma Game ga-akpọrọ gị gaa n’oké ọhịa.
Yabụ, onye bụ ezigbo Eze nwamba? Dabere na nsonaazụ nke egwuregwu gị, azịza ya na-echere na egwuregwu a. Ewezuga nnukwu nwamba ndị ahụ, a na-eme achịcha nwere akụ dị iche iche na agba dị iche iche na akara Royal. Nnukwu nwamba ọ bụla na-acha ọkụ bụ akara ngosi anụ ọhịa na ọnọdụ egwuregwu ya yabụ enwere ọtụtụ anụ ọhịa na egwuregwu a.
King of Cats Megaways atụmatụ
Mgbe obula anyi huru ma obu inu banyere oghere Megaways, otu ihe anyi na echetabunke anyi bu Avalanche. Ma, oge a, anyị ga-ahụ atụmatụ ndị ọzọ na egwuregwu nke egwuregwu egwuregwu anụ ọhịa a. King of Cats Megaways Slot has 6 reels na 2 ka 7 ahịrị nke gosipụtara atụmatụ ya. Yabụ, ka anyị lelee atụmatụ ya pụrụ iche otu n’otu na-amalite site na akara Scatter.
Scgha Scatter na oghere a na-anọchi anya akara ngosi Golden Paw. E wezụga ihe nnọchianya anụ ọhịa, Scatter a bụ akara ngosi kachasị mkpa na King of Cats Megaways. Abịa 3 ma ọ bụ karịa Akara gbasasịa bụ igodo gị iji rụọ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na egwuregwu a.
Ndị na-egwu egwu
Ozugbo ị kpọtụrụ King of Cats Megaways, atụmatụ mbụ ị ga-enweta bụ Playerelect. Na atụmatụ a, ị nwetara usoro egwuregwu abụọ ebe ị ga-ahọrọ n’etiti egwuregwu Puma na ọdụm ọdụm. Ya mere, enwere bọtịnụ abụọ na-atụgharị (otu maka ọdụm na otu maka Puma) kama nke nke na-adịkarị n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu cha cha niile.
Nweere onwe gị ịhọrọ ọdụm ma ọ bụ egwuregwu Puma oge ọ bụla dabere na ọnọdụ gị. Ọ bụrụ n’ịhọrọ nhọrọ AutoSpin, ịnwere ike ịgbachi spins gị n’ime otu oge ụfọdụ. Ma ebe ọ bụ na RTP nke King of Cats Megaways dịkwa iche, egwuregwu ọ bụla na-abịa na usoro nke ndị mmezi na obere atụmatụ.
N’oge Ọdụm egwuregwu, isi mmegharị na-atụ anya na esi anwụde bụ anụ ọhịa akara nke na-eburu Multipliers dị iche iche. Nke a na akara na-anọchi anya a Wild Lion Multiplier nke nwere ike ịdakwasị nha dịgasị iche iche sitere na 2 × 2 ruo 4 × 4. Ihe mgbakwunye ya jikọtara site na 4x ruo 16x nke kwekọrọ nha:
2 Lion 2 Odum Anumanu = 4x Onye Nmeghari
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Lion
Mgbe ị rutere dakọtara akara ngosi na-agbasasị n’oge egwuregwu Lion, ị ga-enwetakwa ego ndị a:
Ihe akara akara 3 = 8 Spon Bonus Spins4 Ihe akara akara = 12 Lion Spins Spins5 akara ngosi = 16 Lion Bonus Spins6 Ihe ngosi akara = 20 Lion Bonus Spins
N’ime ego a, oke ọdụm ọdụm na-amalite site na 2 × 2 ebe Multiplier ya malitere site na 4x.
4x Ntughari. Oge ọ bụla akara ngosi Ọhịa ọhịa, Wild Lion Multipliers na-ejikwa 2, 5, ma ọ bụ 8. mụbaa, N’ikpeazụ, ị ga-atụgharị Spins Bonus ma ọ bụrụ na ị daa ala 3 ma ọ bụ karịa akara akara dị ka ndị a:
Ihe akara akara 3 = 4 Bonus Bonus Spins4 Ihe akara akara = 8 Ọdụm Bonus Oghere5 Ihe ngosi akara = 12 Ọdụm Bonus Oghere6 Gbasara akara = 16 Ọdụm Bonus
Ọ bụrụ na ị merie mgbanye ndị a, a na-agbakwunye ndị a na akpaghị aka. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ọbụna merie na-akparaghị ókè daashi spins!
Ọ bụrụ na ịhọrọ egwuregwu Puma, Puma Wilds nwere ike ịpụta na wiil ọ bụla. Ozugbo egwuregwu a dị, Puma Wilds nwere ike inye aka mee ka ohere ịnweta mmeri gị gbanwee site na ịtụgharị ruo 3 reels n’ime ọhịa. Onye ọ bụla Puma Wild na-abịa na Multiplier nwere njikọ sitere na 2x, 3x, ma ọ bụ 4x. Imeri kachasị nke ị ga – enweta n’oge Puma base egwuregwu ruru 1,070x osisi gị.
Puma Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Iji rụọ ọrụ Puma Bonus Spins, ịkwesịrị ịdọrọ ma ọ dịkarịa ala akara 3 Gbasaa n’ebe ọ bụla gburugburu. Dabere na ọnụọgụ nke akara akara ị dara, Puma Bonus Spins ị nwere ike nweta bụ ndị a:
Ihe akara akara 3 = 15 Puma Bonus Spins Ihe ngosi 4 = 18 Puma Bonus Spins5 akara akara = 21 Puma Bonus Spins6 akara ngosi = 21 Puma Bonus Spins
Ihe ngosi Puma Bonus Spins malitekwara na Multipliers ọkọlọtọ nke sitere na 2x, 4x, na 6x. A na-ejikọta Multipliers ndị a na Puma Wilds yabụ oge ọ bụla Puma Wild pụtara, uru ya na-abawanye. Uru nke Wilds na-abawanye site na 1, 2, na 3 dịka ọnụọgụ nke Scatters dị ugbu a.
Ka o sina dị, enweghị oke ọ bụla ma a bịa na uto nke Wild Pumas. Dị ka ọ dị na Spins Ọdụm Agwọ Agwọ gara aga, ọ ga-ekwe omume ịmegharị Spins Bonus na egwuregwu a. Land 3 ma ọ bụ karịa gbasasịa ma ị nwekwara ike chegharia usoro ego iji nweta mgbakwunye ndị ọzọ:
Ihe akara 3 = Puma Bonus Spins 4 akara akara = 9 Puma Bonus Spins5 akara akara = 12 Puma Bonus Spins6 akara ngosi = 15 Puma Bonus Spins
Ọzọ, enweghi oke ọ bụla mgbe ọ na-echegharị ego ndị ọzọ a. Can nwere ike retrigger ya otutu ugboro gị dum gaminggba Cha Cha nnọkọ.
King of Cats Megaways RTP, ịkụ nzọ, na onyinye
King of Cats Megaways nwere usoro egwuregwu 2 yabụ na-atụ anya na ọ ga-enwe ọtụtụ ụzọ iji merie karịa oghere ndị ọzọ. Na random ụzọ iji merie, a oghere abịa na a kacha nke 117,649 Megaways ebe ị pụrụ nzọ £ 0.20 na £ 20. King of Cats Megaways bụkwa egwuregwu egwuregwu dị egwu nke nwere ụdị RTP abụọ. Egwuregwu Ọdụm ya na-abịa 96.72% RTP ka egwuregwu Puma ya na 96.70% RTP na-abịa.
Ka o sina dị, usoro egwuregwu abụọ a na-agbanwe nke ukwuu. Ihe a na-akwụ ụgwọ gụnyere 4 bara nnukwu uru na agba na ụkpụrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị daa 6 bara nnukwu uru, ụgwọ ọrụ gị ga-abụ ihe bara uru 1x na 25x osisi gị. E nwekwara Royals nke gụnyere 9 ka A kaadị suut na-arụ ọrụ dị ka akara ngosi na-akwụ ụgwọ. N’ihe banyere akara anụ ọhịa, e nwere ụdị anụ ọhịa 3 ị ga-atụ anya na esi anwụde.
A na-enwekarị Ọhịa mgbe anụ ọhịa 2 ndị ọzọ fọdụrụnụ bụ anụ ọhịa Ọhịa na akara Puma ọhịa. Ihe mmeri i nwere ike inweta site na Lion Game Bonus Spin sitere na 6,060x ruo 24,200x osisi gị. Banyere Puma Game Bonus Spin, ị nwere ike imeri opekata mpe nke 1,070x ma ọ bụ ihe dị ka 56,620x osisi gị. Nke a bụkwa oke jackpot nke King of Cats Megaways nwere ike inye.
Gịnị bụ ihe RTP na King of Cats Megaways oghere?
King of Cats Megaways oghere nwere 96.72% RTP, nke dị oke elu.
Kedu onye na-eweta egwuregwu wepụtara King of Cats Megaways?
Eze nwamba Megaways si na Big Time Gaming. Nke ahụ bụ ụlọ ọrụ n’azụ aha Megaways.
Gịnị bụ volatility na King of Cats Megaways?
Eze nwamba Megaways nwere nnukwu volatility.
Na mkpokọta, Eze nwamba Megaways bụ egwuregwu mara mma na-atọ ụtọ yana atụmatụ ya niile. King of Cats Megaways anaghị enye ọtụtụ atụmatụ mana o nwere atụmatụ siri ike nke na-atọ ụtọ ma na-akwụghachi ụgwọ. Ya Playerelect atụmatụ dịka ọmụmaatụ nwere ike inyere ndị egwuregwu ume ịgba ume kama ịgbanwee egwuregwu ọzọ. Ndị na-egwu egwu nwere nnwere onwe ịhọrọ n’etiti Egwuregwu Lion na Puma Game nke dị jụụ.
Ozugbo ike gwụrụ gị na otu ọnọdụ, ị nwere ike ịgbanwee egwuregwu nke ọzọ na ntụgharị ndị ọzọ. N’agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike irite uru nke Bonus Spins na ịba ụba Multipliers. Ọ bụ ezie na nke a bụ oghere na-agbanwe agbanwe, Big Time Gaming mere ka ọ bụrụ na jackpot ya kachasị buru ibu. Yabụ, ịnwe ihe egwu na ntụgharị ọ bụla bara uru ịnwale. Nwere ike iweghachite mgbakwunye Bonus ọzọ ugboro ugboro.
Tags:Eze Megaways nwamba nyochaa RTP